Dreamland Beach any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Dreamland Beach any Bali. Indonezia
Dreamland Beach any Bali. Indonezia
Morontsiraka Dreamland any Bali
Topimaso momba ny Dreamland Beach eo Bukit
Dreamland Beach any Bali... (Indonezia) dia any atsimon'ny nosy, izany hoe any amin'ny faritra andrefan'ny Saikinosy Bukit. Ny fasika eto dia manana loko volamena maivana. Sahabo ho 500 m ny morontsiraka. Noho ny onja mahery dia manana laza i Dreamland ho iray amin'ireo toerana fialokalofana Bali tsara indrindra. Na izany aza, tsy mety amin'ny filomanosana izy io.
Avy amin'ireo havoana ambonin'ny morontsiraka dia misy fomba fijery mahafinaritra misokatra, na hatrany amin'ny morontsiraka na amin'ny filentehan'ny masoandro. Mora ny manatona azy amin'ny alàlan'ny fitateram-bidy na taxi, satria an-tongotra izany dia fitsapana mafy amin'ny fiaretana.
Mampiavaka ny morontsiraka koa ny onja mahery sy ny onja mahery. Noho izany, ity morontsiraka ity dia tsy dia mety loatra amin'ny fianakaviana manan-janaka.
Onja amin'ny Dreamland Beach. Bukit. Kuta. Bali
Ny morontsiraka rehetra dia voahodidin'ny harambato vatosokay. Izy ireo dia ampahany amin'ny haran-dranomasina izay rakotra zavamaniry matevina. Saingy miboridana kosa ireo teho-tampon'ireo hantsana ireo. Ny lamina manintona dia namboarina avy amin'ny sosona rock. Amin'ny hariva, ny masoandro dia hita taratra amin'ny rano ary koa ivelan'ny vatolampy. Noho io antony io dia azo antoka ny mahita ny filentehan'ny masoandro eto.
Filentehan'ny masoandro tao amin'ny Dreamland Beach
Ny fidinana amin'ny morontsirak'i Dreamland dia entina an-tongotra avy eo amin'ilay havoana, izay hita ao amin'ny tanànan'i Pecatu.
Ny faritany manontolo amin'ity morontsiraka ity dia rakotra fasika volamena tsara. Misy faritra mainty koa any akaikin'ny vatolampy basalt. Akaiky ny morontsiraka dia rakotra fasika ihany koa ny ambany, saingy somary lavitra eo amboniny dia misy vato maro. Avo ny onja eto - 1 m na mahery. Matetika ny zana-kazo 3 dia mihodina manaraka ny morona. Misaotra an'io fa azo atao surf eto sy surf amin'ny vatana.
Zavatra tokony hatao ao amin'ny Dreamland Beach:
Surfing, fitetezana vatana;
mitsidika trano fisakafoanana.
Amin'ny ankapobeny, ny fotodrafitrasa amin'ity morontsiraka ity dia azo antsoina hoe mandroso tsara. Izy io dia ahitana trano fisakafoanana, kafe, efitrano fialan-tsasatry ny masoandro ary hofan-trano elo ary surfboard. Eo koa ny trano fidiovana sy fandroana. Ekipa mpiambina aina no miasa amoron-dranomasina.
Dreamland Beach dia any atsimon'ny Bali, any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Saikinosy Bukit
adiresy: Dreamland Beach, Jalan Griya Alam Pecatu 80364, Pecatu, Bali, Indonesia
Morontsiraka Dreamland amin'ny sari-tanin'i Bali
Morontsiraka Dreamland amin'ny sari-tany zanabola ao Bali
Ny fidirana amin'ny faritry ny Dreamland dia aloa - 5 000 ropia.
Masoandro mipetraka any anaty masoandro Miankina amin'ny lafin-javatra maro ny vidiny. Afaka mifantoka amin'ny vola 10 ianao.
Sary amoron-dranomasina Dreamland
Sarin'ny morontsirak'i Dreamland any Bali
Morontsiraka Dreamland avy amin'ny drone
Rano ambany amin'ny Dreamland
Onja amin'ny Dreamland Beach
Ny hantsana kanto eo amoron-dranomasina dia takiana hatrany ao amin'ny Dreamland
Fijanonana bisikileta ao amin'ny Dreamland Beach
Eo amin'ny ilany havia amin'ny morontsiraka (atsimo) no manomboka ny vato toy izany